N’ihi Gịnị Ka Ihe Ndị Na-akpali Agụụ Mmekọahụ Ji Jupụta Ebe Nile?
Teta! | Ọgọst 8, 2003
GỤỌ NKE Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Gujarati Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Portuguese Romanian Russian Setswana Slovak Slovenian Swahili Turkish Ukrainian
IHE ndị rụrụ arụ bụ́ ndị na-eme ka mmadụ nwee mkpali mmekọahụ malitere laa azụ n’ọtụtụ puku afọ. Ma n’oge ahụ nile ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ dị, ọ na-esi ike mmepụta, n’ihi ya ọ bụkwa ndị bara ọgaranya na ndị na-achị achị na-enweta ya karịsịa. Ibipụta akwụkwọ n’ìgwè na mmepụta e mepụtara foto na ihe nkiri sinima gbanwere ihe nile. Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ bịara bụrụ ihe ndị na-abachaghị ọgaranya pụrụ inweta.
Mmepụta e mepụtara ígwè e ji akpọ vidio mere ka ihe ka njọ. N’adịghị ka sinima na foto ndị meworo ochie, kaseti vidio na-adị mfe ndebe, mmepụtaghachi nakwa nkesa. Mmadụ pụkwara ikiri ha n’ebe obibi ya nanị ya. N’oge na-adịbeghị anya, njupụta nke ụlọ ọrụ telivishọn ndị a na-enweta na satellite nakwa n’Intanet emewo ọbụna ka ọ dịkwuo mfe inweta ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Onye na-atụ egwu na onye agbata obi ya ga-ahụ ya n’akụkụ ụlọ ahịa na-ere vidio ndị na-akpali agụụ mmekọahụ pụziri “ịnọ n’ụlọ ma tụọ ọda ya site n’ịpị bọtịn dị na TV ya, ma ọ bụ site n’ịhọrọ ihe omume a na-enweta na satellite,” ka otu onye na-enyocha usoro mgbasa ozi bụ́ Dennis McAlpine na-ekwu. Dị ka McAlpine si kwuo, nnweta a pụrụ inweta usoro ihe omume telivishọn dị otú a n’ụzọ dị mfe esowo mee ka “ọtụtụ ndị mmadụ na-anabatakwu ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ.”
Ihe Ndị Na-akpali Agụụ Mmekọahụ Aghọọ Ihe Ọtụtụ Ndị Na-anabata
Ọtụtụ mmadụ na-enwe uche abụọ banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n’ihi na ọtụtụ ndị na-anabatazi ya. “O nweelarị mmetụta dị nnọọ ukwuu n’ebe ọdịbendị anyị dị karịa mmetụta nile egwú opera, egwú ballet, ebe ihe nkiri na ọrụ nkà na-enwe,” ka onye edemede bụ́ Germaine Greer na-ekwu. Otú e si ele ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ anya n’oge a pụrụ ịpụta ìhè n’otú ndị a ma ama si na-eji ejiji ‘yiri nke ndị akwụna,’ nakwa na vidio egwú ndị a na-egosiwanye mmekọahụ na ha, na nnabata ndị na-eme mkpọsa ngwá ahịa n’usoro mgbasa ozi na-anabata “iji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ eme ihe.” McAlpine kwubiri, sị: “Ọha mmadụ na-anabata ihe ọ bụla e gosiri ya n’usoro mgbasa ozi. . . . Nke ahụ na-enye aka eme ka e nwee echiche bụ́ na ihe ndị a nile dị mma.” N’ihi ya, “ihe ndị ahụ eyighị ka hà na-awụ ndị mmadụ akpata oyi n’ahụ́,” ka Andrea Dworkin, bụ́ onye dere akwụkwọ na-akwa n’arịrị. “O yiri ka ha achọghịdị ịma.”
Ihe Mere Ndị Mmadụ Ji Ekiri Ihe Ndị Na-akpali Agụụ Mmekọahụ
N’ikwu ihe yiri ihe Dworkin, bụ́ onye dere akwụkwọ kwuru, onyeisi ọrụ nke ụlọ ọrụ FBI bụ́ Roger Young na-akọwa na ọtụtụ ndị “adịghị nnọọ ahụcha ihe ọjọọ ndị na-esi n’omume rụrụ arụ apụta nakwa nsogbu ndị ọ na-akpata.” Ụfọdụ na-abụ ndị ndị na-akwado ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ megharịrị anya, na-azọrọ na e nweghị ihe àmà ọ bụla na-egosi na foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-emetụta ndị mmadụ n’ụzọ na-adịghị mma. “Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ bụ nanị echiche efu,” ka F. M. Christensen, bụ́ onye dere akwụkwọ, na-ekwu, “bụ́ eziokwu nke ndị na-emegide ya yiri ka hà na-enwe ihe isi ike ịghọta.” Ma ọ bụrụ na echiche efu adịghị enwe mmetụta n’ahụ́ mmadụ, oleezi ihe ndị na-eme mkpọsa ngwá ahịa na-adabere na ya eme mkpọsa ha? N’ihi gịnị ka ụlọ ọrụ dị iche iche na-eji emefu ọtụtụ nde dollar n’imepụta mkpọsa ngwá ahịa, vidio, na mkpọsa ngwá ahịa ndị e biri ebi ma ọ bụrụ na ha adịghị enwe mmetụta na-adịgide adịgide n’ebe ndị mmadụ nọ?
Nke bụ́ eziokwu bụ na, dị ka mkpọsa ngwá ahịa nile na-aga nke ọma, nzube ndị mmadụ ji eji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ eme ihe bụ iji kpalie agụụ a na-enwebughị. “Ọ dịghị ihe ọzọ na-akpata iji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ eme ihe ma ọ bụghị uru ahịa,” ka ndị nnyocha bụ́ Steven Hill na Nina Silver na-ede. “N’ọmà ahịa a a na-ere ihe aghara aghara, a pụrụ ire ihe ọ bụla iji nweta uru, karịsịa ahụ́ ndị inyom na ndị na-enwe mmekọahụ.” Greer ji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ tụnyere nri onye ọ dị ngwa ngwa nke na-eri nnọọ mmadụ ahụ́, bụ́ nke na-enweghị ihe na-edozi ahụ́, nke e tinyekwara ihe ga-eme ka ọ tọkwuo ụtọ nakwa mmiri ọgwụ. “Mmekọahụ a na-egosi n’usoro mgbasa ozi,” ka ọ na-ekwu, “bụ mmekọahụ adịgboroja . . . Mkpọsa ihe oriri na-akwalite orire nke ihe oriri ndị na-adịghị enye ihe n’ahụ́, mkpọsa mmekọahụ na-akwalitekwa mmekọahụ na-adịghị enye afọ ojuju.”
Ụfọdụ ndị dọkịta na-ekwu na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ pụrụ ịkpali omume riri mmadụ ahụ́ nke siri ike nkwụsị karịa ọgwụ ọjọọ iri mmadụ ahụ́. A na-amalitekarị ịgwọ ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ́ site n’ime ka ọgwụ pụsịa ha n’ahụ́. Ma mmadụ ịbụ onye ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ riri ahụ́, ka Dr. Mary Anne Layden nke Mahadum Pennsylvania na-akọwa, “na-etinye onyinyo na-adịgide adịgide n’uche onye na-eji ya eme ihe, ọ na-aghọkwa akụkụ nke usoro ịrụ ọrụ nke ụbụrụ.” Ọ bụ ya mere ndị mmadụ pụrụ iji cheta n’ụzọ doro anya foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ bụ́ ndị ha kiriri n’afọ ndị gara aga. O kwubiri, sị: “Nke a bụ ihe mbụ na-eri mmadụ ahụ́ nke a na-enweghị olileanya ọ bụla nke ime ka ọ pụsịa n’uche mmadụ.” Ma nke ahụ ọ̀ pụtara na ọ gaghị ekwe mee mmadụ inwere onwe ya pụọ ná mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ? Oleekwa ihe ọjọọ ndị ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ pụrụ ịkpata?
Ihe Ndị Bụ́ Eziokwu Banyere Ihe Ndị Na-akpali Agụụ Mmekọahụ n’Intanet
▪ Ihe dị ka pasent 75 nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n’Intanet na-esite na United States. Ihe fọrọ nke nta ka o ruo pasent 15 na-esite na Europe.
▪ A na-eme atụmatụ na ihe dị ka nde mmadụ 70 na-aga n’ebe ndị a na-edebe ihe ndị na-akpali ag̣ụụ mmekọahụ n’Intanet n’otu izu. Ihe dị ka nde mmadụ 20 n’ime ndị a nọ na Canada nakwa na United States.
▪ Nnyocha e mere gosiri na n’ime otu ọnwa na-adịbeghị anya, Germany nwere ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ndị na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n’Intanet na Europe, ndị ọzọ na-esochi ha bụ Great Britain, France, Ịtali, na Spen.
▪ Na Germany, ndị na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n’Intanet na-etinye nkezi nke minit 70 kwa ọnwa n’ikiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n’Intanet.
▪ N’etiti ndị Europe na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n’Intanet, ndị gafeworo afọ 50 na-etinye oge kasị ukwuu n’ịga n’ebe ndị a na-edebe ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n’Intanet.
▪ Dị ka otu akwụkwọ si kwuo, pasent 70 nke ọtụtụ ndị na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n’Intanet na-ekiri ya n’ehihie.
▪ Ụfọdụ ndị na-ekwu na ihe e mere atụmatụ ịbụ 100,000 ebe ndị a na-edebe ihe ọmụma n’Intanet nwere foto ụmụaka ndị na-akpali agụụ mmekọahụ.
▪ Ihe dị ka pasent 80 nke foto ụmụaka ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n’Intanet bụ́ ndị a na-ere ere sitere na Japan.
Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ aghọọla ihe ọtụtụ ndị pụrụ inweta
Ihe Ndị Na-akpali Agụụ Mmekọahụ—Echiche Ndị Na-emegide Ibe Ha
Ihe Ọjọọ Ikiri Ihe Ndị Na-akpali Agụụ Mmekọahụ Na-akpata
N’ihi Gịnị Ka M Ji Eche na Aghaghị M Izu Okè?
Ịkpọasị Agbụrụ Ọ̀ Ziri Ezi?
Tahiti—Na Ọchịchọ A Na-achọ Paradaịs
Ihe Ọ Na-adịghị Oké Mmiri Ozuzo Pụrụ Ịsachapụ Ya
“Ịgbà nke Na-ada Ọtụtụ Ụda”
Abamuru Nye Obodo
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu MAGAZIN Ọgọst 8, 2003
Ọgọst 8, 2003
MAGAZIN Ọgọst 8, 2003